Apple dochie ọzụzụ ihu na ihu nke Genius ya na seminar ndị dị n'ịntanetị | Esi m mac
Apple na-anọchi ọzụzụ ihu na ihu nke Genius ya na seminarị n'ịntanetị
Ọzụzụ ntanetị dị na ntanetị ka toro na afọ ndị na-adịbeghị anya n'okpuru nchedo nke mgbasawanye nke ịntanetị, njikọ dị elu na nke ka mma yana, karịa ihe niile, ekele maka mbata nke ngwaọrụ mkpanaka dịka iPhone na iPad Nke ahụ na-enye anyị ohere mụta site na ebe ọ bụla na mgbe ọ bụla. Ma olee otu ọ ga - esi bụrụ ihe ọzọ, Apple, dịka ụlọ ọrụ teknụzụ ọ bụ, ọ dị ka ọ ga - ewere nnukwu mkpebi na nke a gbasara nhazi nke Genius.
Ruo ọtụtụ afọ, ụlọ ọrụ apụl ezigala ụfọdụ Genius na ụlọ ọrụ Cupertino, Austin ma ọ bụ Atlanta iji nweta ọzụzụ dị mkpa. Ọzụzụ a were izu atọ. Otú ọ dị ugbu a, Ahịa Apple, ụlọ ọrụ ahịa nke ụlọ ọrụ ahụ gụnyere ụlọ ahịa ya, gaara emecha ọzụzụ nke Genius ya na Cupertino, dochie ọzụzụ ihu na ihu na webinars dị n'ime ụlọ ahịa.
1 Ugbu a Genius ga-amụta site na weebụ
2 Ka e mesịrị na "ahụmahụ mgbanwe ndụ"
Ugbu a Genius ga-amụta site na weebụ
Ka "Genius" ya wee bụrụ ezi ndị ọkachamara na nchọpụta nsogbu na imezi ngwaahịa nke ika ahụ, ọtụtụ afọ, Apple zigara ndị ọrụ ya ndị mejupụtara ọnọdụ Genius na isi ụlọ ọrụ ya dị na Infinite Loop. Na Cupertino; n'oge ndị ọzọ, ndị ọrụ a ga-abụ ụlọ ọrụ enyemaka nke ụlọ ọrụ ahụ na Atlanta na Austin.
Ọzụzụ a bara uru were izu atọ, dịka "ndị maara ihe n'okwu a si kwuo," haziri n'òtù ndị gụnyekwara njem na ebe obibi maka ndị ọrụ. Mana nke a dịka ọ bịara na njedebe na a gbanwere usoro ọzụzụ nke Genius site na ahụmịhe nke nduzi onwe onye nke na-ewere ọnọdụ na ụlọ ahịa ahụ n'onwe ya n'oge a na-eji ihe ọzụzụ nke Apple nyere ozugbo.
Usoro ohuru a nke mmuta na nkuzi putara ihe ịlele nzukọ ọmụmụ ihe n'ịntanetị site na sistemụ Usoro Nkuzi Nkuzi nke Applema ọ bụ Atlas, dika ozi sitere na uzo ozo.
Apple nwere obere ụlọ akwụkwọ ọzụzụ na agụmakwụkwọ na isi ụlọ ọrụ Cupertino (California) nke gụnyere nkwekọ Genius Bar dị ka nke anyị na-achọta na ụlọ ahịa apụl, yana ọtụtụ kọmputa Mac ndị edobere maka ndị na-amụ ọrụ. mmezi omume a na-akụziri ha. Agbanyeghị, site na mgbanwe na nso nso a na webinars, Genius na-amụta na-enweghị ngwaike anụ ahụ.
Dabere na ozi a, onye maara okwu ahụ kwuru na "Nke a pụtara na ọtụtụ ndị ahịa na-eweta kọmputa ha maka ịrụzi nwere ike [bụrụ ndị] onye na-arụtụbeghị ụdị ọrụ kọmputa ha tupu ".
Ka e mesịrị na "ahụmahụ mgbanwe ndụ"
Kemgbe ọtụtụ afọ, ụfọdụ n'ime ndị a Genius ekerịtala ụfọdụ onyonyo site na netwọkụ mmekọrịta, ọbụnakwa enwela ndị kọwarala usoro a nke nkuzi ihu na Apple ka a "ndụ mgbanwe ahụmahụ". Site na MacRumors Ha ekwuwo okwu na ụfọdụ ndị nwere ahụmahụ a ma kọwaa ya a "rite nke ngafe" y «A milestone ke ọrụ» site n'aka onye ọrụ na-ere ahịa Apple.
Usoro ọzụzụ Apple's Genius bụ nke ọtụtụ afọ maka ndị ọrụ Apple Retail: ọ bụghị naanị ọzụzụ ọzụzụ, kama ọ bụ ohere iji gaa n'otu ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ Apple, ịza ajụjụ na isi mmalite ya na ndị na-aga Cupertino, iji nweta Ndagwurugwu Silicon na omenala Apple. Omenala ọdịnala nke dị n'ihu Onye Na-enweghị Nkwụsị bụ ihe dị ịrịba ama na ọrụ Apple Genius.
N'oge ahụ, amabeghị ma ọ bụrụ na mgbanwe a ga-abụ nke doro anya, ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ ga-alọghachi n'ọdịnihu, n'agbanyeghị na ọ ga-eme ya na ogige apụl ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple na-anọchi ọzụzụ ihu na ihu nke Genius ya na seminarị n'ịntanetị
Onye guzobere WiFiSlam hapụrụ Apple maka mmalite mmalite